နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၆) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 26, 2014 at 11:41 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီနေ့ အပိုင်းမှာ တယ်လီဖုန်း ပြောရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်း နဲ့ စကားပြောတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Barbara : Hello.
Fred : Hello. May I speak to Alice Weaver, please?
Barbara : Justaminute ... Alice, it's for you.
Alice : Hello.
Fred : Hi, Alice. This is Fred. Would you like to go toamovie tonight?
Alice : Thanks, I'd love to. I haven't been toamovie foralong time.
Fred : Good. I’ll pick you up around seven – thirty, then. The movie starts at eight.
Alice : Fine, I’ll be ready.
(Phone clicks down)
Hello ကို တယ်လီဖုန်း ထူးတဲ့အခါမှာ သုံးတယ်။ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတွေကျတော့ တယ်လီဖုန်း ထူးတဲ့အခါ Hello အစား သူတို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နာမည်ကို ထည့်ပြောကြတယ်။
Jones construction company…
Good morning, Jones construction company…
Jones speaking. Construction company, Mr Smith…
May I speak to Alice Weaver, please?
May I speak to… ကို ဒီလိုလည်း ပြောချင်ရင်ရတယ်။ "I would like to speak to Alice Weaver." ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုသူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်သူဆိုတာ အရင် မိတ်ဆက် ပြီး စကားပြောလိုသူကို မေးရတယ်။ ဥပမာ "Hello, this is Fred Young. May I speak to Alice Weaver, please?"
ဒီစကားက Would you like to … ဟာ Do you want to… ထက်ပိုမို ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Do you like to ဆိုတာနဲ့တော့ မရောပါစေနဲ့ အဓိပ္ပါယ် မတူတော့လို့ပါ။
I'd love to = I would love to ဆိုတာ I would like to ထက်ပိုပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ phrase ဖြစ်ပါတယ်။ (အဲ့ဒါတွေဟာ I want to.. ရဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ အစားထိုး phrase တွေဖြစ်ပါတယ်။) အဲ့ဒီ expression တွေကို ရေးသားပြောဆိုတဲ့အခါ ('d ) ပါစေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ဒါမှသာ အဲ့ဒါတွေနဲ့ အဓ်ိပ္ပါယ်နှင့် ပုံစံကွဲပြားတဲ့ I love to… နှင့် I like to.. တုိ့နဲ့ ကွဲပြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
I haven't been toamovie foralong time.
Be ရဲ့ အသုံးက "ရောက်သည်၊ သွားသည်" စတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ ခေတ်ပေါ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး perfect tense နှင့် ပုံမှန်တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ (Have + been+ to+ place)
I haven't been to... = I haven't gone to. . .
I haven't been to England yet, but I hope to go there soon.
We've been to the theatre three times this week.
We hadn't been there at all until last weekend.
Good. I’ll pick you up around seven – thirty, then.
Pick up ကတော့ ခွဲရေးလို့ရတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံးပါ two-word verb ဖြစ်ပါတယ်။
I'll pick you up... = I'll come to your house so that we can go together.
Around seven-thirty = about seven thirty
Around seven-thirty ၇ နာရီမခွဲခင်လောက် အချိန်ကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ပိုပြီးတိကျတဲ့အချိန်ကို ပြောမယ်ဆိုရင် At seven-thirty လို့ပြောမှာဖြစ်ပြီး အချိန်အရမ်းတိကျပြီးတော့ အချိန်မှန်မှု ကို ပြောချင်တယ်ဆိုရင် seven-thirty sharp စသည်ဖြင့် ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီ expression တွေထဲမှာ o'clock က်ို ဖြုတ်ပြောရတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။)
ဒီ Dialogue မှာ "Fine, I’ll be ready." နှင့် အဆုံးသတ်သော်လည်း တယ်လီဖုန်းစကားပြော အဆုံးသတ်တွေမှာ နှစ်ဦးစလုံးက ပုံမှန်အားဖြင့် good bye လို့ပြောပြီးအဆုံးသတ်ကြပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ် ဆင့်ပွား ပြောစကား
အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်မဲ့ အကြံပြ...